Yekusimudzira Mireza Fekitori | China Yekusimudzira Mireza Vagadziri uye Vatengesi
Tafura Nhenga Fegi
Seye mini vhezheni yeRatidziro Mureza, tafura inoratidzira mureza isarudzo yakanaka kwauri kana iwe uchida kushongedza yako saiti pasina mater mune yakasarudzika kana isina kurongeka chiitiko nehuremu hwayo huremu, hudiki uye hwakasiyana chimiro. Graphics anowanikwa aine imwechete kana yakapetwa mativi anodhinda. Iyo Hardware inogona kudzokororwa kushandiswa.
Siya zvakadzama pane vateereri vane podium mireza. Yakagadzirwa kubva kune inokwezva asi yakasimba polyester satin uye inowanikwa muhukuru hwakawanda, kunze kweizvozvo, inotakurika uye nyore kushandisa. Iwo zvakare akanaka pakushandiswa zvachose semalectern mireza mumachechi nenzvimbo dzedzidzo.
Gorofu kosi mireza anoshandiswa kosi dzegorofu pasi rese. Mireza yegorofu inoita basa rakakosha mukubatsira mutambi kuti awane gomba. Ivo vanoonekwa vane yakajeka mavara pane gorofu makosi.
Kana iwe uri kufunga kuendesa meseji yako nenzira yakajeka pabindu rako, patsangadzi kana chero imwe nzvimbo dzekunze, saka unofanirwa kuda mureza webindu. Iwe unogona kugadzirisa zvese zvinoenderana nemureza wako, kubva pachimiro, ruvara, chimiro, logo kune zvinhu kana kunyangwe iko kupedzisa. Iyo yakasarudzika gadheni mureza ine logo yako pairi zvinoreva zvakawanda kupfuura kungo shongedza, asi inoshanda sechiratidzo, kana chiratidzo chinosvitsa mameseji ako kune vanopfuura.
Mureza wemotokari inzira ine mufashoni yekuratidza marogo ako uye zvigadzirwa. Kunyangwe iwe uchityaira mota kana iwe unongomira panzvimbo yekupaka, uine wekusimudzira mota mureza wakaiswa pamota yako, unogona kubata kuziva kwevanhu uye kutarisisa ipapo ipapo. Naizvozvo, pese paunenge uine auto show kana yekushambadzira mushandirapamwe, hapana mubvunzo kuti mireza yemotokari ndiyo sarudzo yakanakisa.
Mireza yesaga chishandiso chakakwana kusimudzira bhizinesi. Izvo zvakanaka zvekusimudzira zviitiko nemishandirapamwe, dumba rako pachiratidziro kana kuchengetedza boka rako rekushanya pamwechete.
Mureza wakadhindwa unowanikwa mumhando mbiri, mana masitaera- Concave, Teardrop, Rectangle uye U-yakaumbwa.